No.96 Zhenban လမ်း၊ Wuyang ရွာ၊ Lijia မြို့၊ Wujin ခရိုင်၊ Changzhou မြို့၊ Jiangsu ပြည်နယ်၊ China 213176
အတန်းဂဟေစက်ကိုအသုံးပြုသောအခါတွင် မည်သည့်အချက်ကို သတိထားသင့်သနည်း။
အတန်းဂဟေစက်သည် C-type single-head row welding machine၊ C-type multi-head row welding machine နှင့် gantry-type multi-head row ဂဟေစက်ဟူ၍ ပိုင်းခြားထားသော အတန်းဂဟေဆက်ခြင်းမှ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ဂဟေလျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် စတုရန်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်သောကြောင့် အထက်နှင့်အောက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် p တွင် ရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပိုက်ကွန်စက်များ၏ ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာဆိုင်ရာ ဘောင်များတွင် အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ သက်ဆိုင်ရာ သတ္တုပိုက်ကွန်များတွင် ကွာခြားချက်ဖြစ်ပြီး လွန်းပျံအကွာအဝေးမှာလည်း ကွဲပြားပါသည်။ ပိုက်ကွန်စက် အလုပ်လုပ်နေချိန်တွင် လွန်းပျံအကွာအဝေးကို ချိန်ညှိနည်းသည် အထူးအရေးကြီးပါသည်။ စိန်ကွက်စင်...
ငါးဖမ်းပိုက်စက်၏ သမိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် လက်ရှိအခြေအနေ
ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သုတေသန ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အလေးထားပြီး စွမ်းရည်မိတ်ဆက်ခြင်း၏ ပြင်းထန်မှုကို တိုးမြှင့်ပါ။ စျေးကွက်စီးပွားရေးရေစီးကြောင်းတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် မအောင်မြင်နိုင်ပေ။ နည်းပညာနှင့် အရည်အချင်းများကို အဆက်မပြတ် မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ထုတ်ကုန်အသစ်များ ဖန်တီးခြင်းနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့်သာ ...
Mesh နှင့် Mesh အထည်များကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
Mesh နဲ့ Mesh အထည်တွေကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။ ကွက်ထည်များသည် ကွက်ထည်များဖြစ်သည့် ကွက်ထည်များ၊ အော်ဂဲနစ်ယက်လုပ်ကွက်များ နှင့် ယက်ကွက်ထည်များ (လက်ရှိ ယက်မဟုတ်သော) ယက်လုပ်ကွက်များသည် အဖြူရောင်ယက်လုပ် သို့မဟုတ် ချည်ဆိုးထားသောအထည်များဖြစ်သည်။ လေဝင်လေထွက်ကောင်းပြီး အရောင်ဖျော့ပြီး ဆေးဆိုးပြီးနောက် အထည်ကိုယ်ထည်...
ရက်ကန်းစက်၏ဘေးကင်းမှု၊ သာမန်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများက ရက်ကန်းစက်အကြောင်း ဘယ်လောက်သိလဲ။ ယက်လုပ်စက်၏ အင်္ဂါရပ်များနှင့် အားသာချက်အချို့- ဝါယာကြိုးစည်းရိုးများ၊ ဝါယာကြိုးများ ခြံစည်းရိုးများနှင့် ကျောက်ခြံစည်းရိုးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အောက်ပါ အားသာချက်များ ရှိသည်- 1. ခိုင်ခံ့မြင့်မားသော သွပ်ရည်စိမ်စတီးဝါယာကြိုးများကို အသုံးပြုသည်...
ချည်ထိုးစက်က ဒယ်အိုးခေါင်းကို ခုန်ရတဲ့အကြောင်းရင်း
warp knitting machine သည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ဒယ်အိုးခေါင်းကို ခုန်ရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ warp let-off သည် main shaft အပြောင်းအလဲကို မလိုက်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ Warp knitting machine control cabinet ၏အဓိကအကြောင်းရင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ①- အီလက်ထရွန်းနစ် စွန့်ပစ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ပြဿနာတစ်ခု ရှိနေသည်...
ရက်ကန်းစက်သည် stainless steel ဝါယာကြိုးကွက်များ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာများ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး နည်းပညာများ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်လာမှုနှင့်အတူ၊ စက်ယန္တရားများ၊ မော်တော်ကားများနှင့် အခြားစက်ကိရိယာများတွင် အသုံးပြုသော သံမဏိဝါယာကြိုးများကို စစ်ထုတ်ခြင်းဖြင့် စက်ကိရိယာများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အားကောင်းစေပြီး လျင်မြန်စွာ စိတ်ကြိုက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်...
warp knitting စက်သည် ကုန်ကြမ်းများနှင့် အထည်မျိုးကွဲများနှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာ လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး စက်၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား မြင့်မားသောကြောင့် ၎င်းသည် လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်။ ဒါဆို warp knitting machine မှာ ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ နိယာမတွေရှိလဲ၊ warp kn ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို အနီးကပ်ကြည့်ကြရအောင်။
အတန်းဂဟေစက်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ ဘာတွေကို သတိထားသင့်လဲ။
21-08-27 ရက်နေ့တွင် admin မှ
ဇာထည်များ၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ- ဇာထည်သည် ပုံမှန်တင်သွင်းလာသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ကွက်ပုံတည်ဆောက်ပုံနှင့် ပထမဆုံး ဇာထိုးဖြင့် လက်ဖြင့်ယက်လုပ်ပါသည်။ ၎င်း၏ ပေါ့ပါးသော၊ ပါးလွှာပြီး ဖောက်ထွင်းမြင်ရသည့် အသွင်အပြင်ကြောင့်၊ ဇာထည်များသည် ကြော့ရှင်းပြီး ဆန်းကြယ်သော အနုပညာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီး အမျိုးသမီးများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်...
ချည်ထိုးစက်များ အမျိုးအစားခွဲခြင်း သင်သိလိုသည်
admin မှ 20-12-28 ရက်နေ့တွင်
ချည်မျှင်၊ ချည်မျှင်များကို ချည်မျှင်များကြားတွင် ချည်နှောင်ခြင်းများ ပြုလုပ်သော အထည်များ (အထည်အလိပ်များ) ပြုလုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ချည်ထိုးခြင်းကို အဓိကအားဖြင့် weft knitting နှင့် warp knitting ဟူ၍ ခွဲခြားထားသည်။ ချည်ထိုးခြင်းကို လက်ဖြင့်ဖြစ်စေ စက်ဖြင့်ဖြစ်စေ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အပြားလိုက်ဖြစ်စေ အဝိုင်းတွင်ဖြစ်စေ ချည်ကြိုးများကို အတန်းလိုက် ဖန်တီးခြင်းဖြင့် ချည်ခြင်းပြုလုပ်သည်။ ဒီထဲမှာ...
Changzhou Aoyuan ဆောက်လုပ်ရေးပိုက်ကွန်စက်
Changzhou Aoyuan ဆောက်လုပ်ရေးအသားတင်စက် မော်ဒယ် HY280-series၊ ၎င်းသည် တစ်ခုတည်းသော အပ်ကုတင် Raschel ချည်ထိုးစက်ဖြစ်ပြီး အမျိုးမျိုးသော ကုန်ကြမ်းအမျိုးအစားအားလုံးတွင် အဝိုင်းချည် (မိုနိုချည်) ပြုလုပ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ဥပမာ နိုင်လွန်၊ PE၊ PP စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဤစီးရီးသည် spe ကိုထိန်းချုပ်ရန်အင်ဗာတာများကိုအသုံးပြုသည်...
လိပ်စာ- No.96 Zhenban လမ်း၊ Wuyang ရွာ၊ Lijia မြို့၊ Wujin ခရိုင်၊ Changzhou မြို့၊ Jiangsu ပြည်နယ်၊ China 213176
အကောင့်ဖွင့်ပြီး နောက်ဆုံးရသတင်းများနှင့် ကမ်းလှမ်းမှုများကို ရယူပါ။